Oral Sex နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိန္းကေလးေတြ ဘာေတြေတြးၾကလဲ?? – Gentleman Magazine
Oral Sex နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေ ဘာတွေတွေးကြလဲ??
ယနေ့ခေတ် လိင်မှုကိစ္စတွေမှာ ယောင်္ကျားလေး မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပါးစပ်နဲ့ ဖျော်ဖြေမှုပေးတဲ့ Oral Sex က မထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်အတွက် သင်မြတ်နိုးတဲ့မိန်းကလေးကို Oral လုပ်ပေးရာမှာ အဆင်ပြေဖို့အတွက် သိထားသင့်တာတွေရှိပါတယ်။ ဘာက သူမကို စိတ်ကြွလာစေတယ်၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းကို သဘောကျတယ်၊ သင့်ရဲ့လျှာ၊ လက်ချောင်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူမကို ဘယ်လိုနှိုးဆွနိုင်တယ် စသဖြင့် သိထားဖို့ အချိန်ယူတတ်ရမှာ ဖြစ်သလို ဒီလိုလုပ်ပေးတာကလည်း သူမအတွက် သာယာမှုရရှိစေဖို့ သင့်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိ ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးကို Oral လုပ်ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လိုတွေးမိလဲဆိုတာကို သိရင် ပိုပြီးအံ့ဩသွားမှာ ဖြစ်သလို သူမအတွက် ပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ Oral ပေးနိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
၁။ မိန်းကလေးတွေက ကြိုပြီး တွေးထားတတ်ကြတယ်။
နှစ်ဦးသားချစ်တင်းနှောချိန်မှာ ယောင်္ကျားလေးဖက်က Oral လုပ်ပေးဖို့ မလုပ်ပေးဖို့ မသေချာပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ ကြိုတွေးပြီး ပြင်ဆင်ထားတတ်ကြပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ စိတ်ကူးနဲ့မှန်းဆနေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ သန့်ရှင်းနေစေဖို့ ပြင်ဆင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ချစ်သူကောင်လေးအတွက် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုပဲ ရရှိစေချင်တာကြောင့် သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေကို သန့်ရှင်းနေစေချင်တတ်ကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အတူနေခါနီးမှာ ကောင်မလေးက အိမ်သာခဏသွားချင်လို့ ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းတာမျိုးက တကယ်အိမ်သာတက်ချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်ရအောင် ဆပ်ပြာ၊ အဆီ စတာတွေနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊ အတွင်းခံလဲဝတ်တာတွေ လုပ်ဖို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် သွားပြီးအလျှင်မလိုပါနဲ့။ သူမအတွက် အချိန်ပေးလိုက်ရင် သင့်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်အတွက်လည်း အဆင်ပြေသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အနမ်းပေးစဉ်မှာလည်း မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။
နှစ်ဦးသားချစ်တင်းနှောဖို့အတွက် အနမ်းတွေပေးနေချိန်မှာ သင့်လက်က အောက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင် သင့်ခေါင်းကိုလည်း ရောက်လာစေချင်ကြပါတယ်။ သူမရဲ့ အောက်ပိုင်းကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ စိတ်တွေကြွလာတတ်ကြပါတယ်။
၃။ ဖြည်းဖြည်းချင်း တဆင့်ချင်းလုပ်ပေးတာကို သဘောကျပါတယ်။
ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်က Blowjob ကို တန်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ မတူပါဘူး။ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ လုပ်မပေးပဲ လျှာနဲ့ တန်းလုပ်တာကို သိပ်မကြိုက်တတ်ကြပါဘူး။ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ အရင်လုပ်၊ တဖြည်းဖြည်းချင်း နမ်းရှုံ့သွားရင်းကနေမှ Oral လုပ်တာကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားမှုလျော့သွားတတ်ပါတယ်။
၄။ အတွင်းခံကို ချွတ်စဉ်အချိန်ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို အချွတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့မျက်လုံးအကြည့်၊ မျက်နှာထားတွေကို ကြည့်ပြီးတော့လည်း စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမရဲ့နောက်ဆုံးအဝတ်အစားကို ချွတ်တဲ့အချိန်မှာ ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ အာရုံအပြည့်ထည့်ပြီး ချွတ်တတ်မယ်ဆိုရင် သူမအတွက် အကောင်းဆုံးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုတာကို ယုံကြည်မျှော်လင့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ပထမဆုံးအကြိမ်အထိအတွေ့ကို ပိုခံစားရတတ်တယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် သူမပစ္စည်းကို လျှာနဲ့ပထမဆုံးထိတွေ့တဲ့ သာယာမှုကို ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မရဲမဝံ့နဲ့ ခံစားချက်က သူမကို ပိုပြီးတော့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်တွေမှာဆိုရင်တော့ ပထမဆုံးအကြိမ်လောက် မဟုတ်တော့ပေမယ့် သူမခံစားတတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ လိုပါတယ်။
မိန်းကလေးအများစုက လက်ချောင်းနဲ့ရော လျှာနဲ့ပါ တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ပေးတာကို သဘောကျတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီလုပ်ပေးတာထက် နှစ်မျိုးလုံးတပြိုင်နက်လုပ်တောမျိုးက သူတို့ကို ကိစ္စပြီးစေဖို့ ပိုပြီးမြန်ဆန်စေပါတယ်။
၇။ အချိန်ကြာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်တတ်ကြတယ်။
ယောင်္ကျားလေးတွေက Oral လုပ်ခံရရင် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကိစ္စပြီးသွားတတ်ကြပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ အများဆုံး(၁၅)မိနစ်လောက်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြာတတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေက စိုးရိမ်နေတတ်ကြတဲ့အတွက် ကိစ္စပြီးဖို့ ပိုခက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမ ကျေနပ်ဖို့အတွက် ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကို မေးစမ်းကြည့်ဖို့နဲ့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ သူမအတွက် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကို အသိပေးထားသင့်ပါတယ်။
၈။ တစ်ခါတစ်လေမှာ စိတ်ပါလာအောင် ကြိုးစားရတတ်တယ်။
ယောင်္ကျားလေးဖက်က အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနေပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ မိန်းကလေးတွေက သာယာမှုကို ခံစားဖို့ အခက်အခဲရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို စိုးရိမ်နေတာ၊ မြန်မြန်ပြီးသွားစေချင်တာ၊ စသဖြင့် အာရုံပျံ့လွင့်ပြီး Oral လုပ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာ ခံစားသက်ဝင်မှု နည်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အနေနဲ့ အသက်ကို မှန်အောင်ရှုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်အောင် ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်မိန်းကလေးကို Oral လုပ်ပေးနေချိန်မှာ သူမက မျက်နှာကျက်ကို ကြည့်နေတာ၊ မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားတာတွေက သူမအာရုံဝင်စားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အောက်ပိုင်းကိုဆင်းသွားပြီး Oral ပေးနေချိန်မှာ သူမပြောစကား နားထောင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သူမက တော်ပြီဆိုရင် ရပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆက်မယ့်ကိစ္စအားလုံးက သူမအတွက် ကျေနပ်စရာမရှိနိုင်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်တော့ လုပ်ချင်တာကို ဆက်သာလုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၁၀။ Oral နဲ့ ကိစ္စပြီးတာကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။
ပုံမှန်နှီးနှောပြီး ကိစ္စပြီးတာထက် ပါးစပ်နဲ့ လက်ကြောင့် ကိစ္စပြီးတာက မိန်းကလေးတွေကို ပြီး လှုံ့ဆော်နိုးကြားစေတာကြောင့် ပိုပြီးခံစားမှုပြင်းထန်စေပါတယ်။
Previous: ခ်စ္သူအေပၚယုံမွားသံသယလြန္ကဲေနသည့္ လကၡဏာ(၆)ခု
Next: ခ်စ္သူမိန္းကေလး သေဘာက်မယ္လို႔ အထင္မွားတတ္သည့္ အခ်က္မ်ား